အကောင်းဆုံး XPE ပစ္စည်းများကစားစက်ထုတ်လုပ်သူနှင့်စက်ရုံ | Yilibao
သန့်ရှင်းရန်လွယ်ကူသည်။ XPE ကစားဖျာသည်ရေစိုခံသည်။ အရှေ့ဘက်တွင်သန့်ရှင်းနိုင်သည်။ သင်ကစိုစွတ်သောအထည်ဖြင့်သန့်ရှင်းနိုင်သည်။
၁။ အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေမှုမရှိခြင်း - XPE ကစားဖျာသည် EPE-friendly material ဖြစ်သော XPE foam ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။
2. Eco-friendly: အဆိပ်မဟုတ်သောပစ္စည်းများဖြစ်သော XPE ရေမြှုပ်။
3. Soft: XPE သည်ပျော့ပျောင်းသောပစ္စည်းဖြစ်ပြီးကလေးများအတွက်လုံခြုံသည်။
၄။ ရောင်စုံ - ဖျာမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ရောင်စုံ။ လှပသောကာတွန်းဒီဇိုင်းများရှိသည်။
၅။ ပညာရေး - ဖျာတွင်ပုံနှိပ်ထားသောအက္ခရာများ၊ တိရိစ္ဆာန်များ၊ နံပါတ်များစသည်တို့ဖြစ်သည်။ ကလေး၏ပညာရေးအတွက်သင့်တော်သည်။
၇။ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန်လွယ်ကူသည်။ XPE ကစားဖျာသည်ရေစိုခံသည်။ အရှေ့ဘက်တွင်ဆေးကြောနိုင်သည်။ သင်ကစိုစွတ်သောအထည်ဖြင့်သန့်ရှင်းနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် "အရည်အသွေးနှင့်စရန်၊ Prestige Supreme" သီအိုရီကိုမကြာခဏဆက်ရှိနေသည်။ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများအတွက်စျေးနှုန်းချိုသာသောအရည်အသွေးကောင်းမွန်သည့်ပစ္စည်းများ၊ အမြန်ဆုံးရောင်းချခြင်းနှင့်စျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်အတွေ့အကြုံရှိရှိပံ့ပိုးပေးခြင်းတို့ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအပြည့်အဝကတိပြုထားပါသည်။ သင်သည် Eco-Friendly ခေါက် XPE အမြှုပ်မဟုတ်သောကာတွန်းပျော့ပျောင်းသောကလေးရေစိုခံကလေးကစားကွင်း။ အလွန်ကြီးစွာသောစျေးနှုန်းနှင့်အချိန်မီပေးပို့မှာ။ ငါတို့နှင့်အဆက်အသွယ်လုပ်ပါ
လျှော့စျေးစျေး China Baby Mat နှင့် Baby Mat ပျော့ပျောင်းဈေးနှုန်း၊ ပြည်တွင်းနှင့်ပြည်ပရှိဖောက်သည်များကိုကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီသို့ လာရောက်၍ စီးပွားရေးစကားပြောဆိုရန်နွေးထွေးစွာကြိုဆိုပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည်“ အရည်အသွေးကောင်း၊ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောစျေးနှုန်း၊ ပထမအဆင့် ၀ န်ဆောင်မှု” ၏နိယာမကိုအမြဲတစေတောင်းဆိုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်တို့နှင့်ရေရှည်ရင်းနှီးဖော်ရွေမှုနှင့်အပြန်အလှန်အကျိုးရှိသောပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကိုတည်ဆောက်ရန်ဆန္ဒရှိသည်။
လျှော့စျေး China XPE Mat နှင့် PVC Mat စျေးနှုန်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအနေဖြင့်ကုန်ကြမ်းအချိန်တိုအတွင်းအနိမ့်ဆုံးကုန်ပစ္စည်းများကို ၀ င်ရောက်နိုင်ရန်သေချာစေရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ဤအောင်မြင်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့၏အရည်အချင်းရှိပြီးအတွေ့အကြုံရှိသောအဖွဲ့မှရရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာအနှံ့ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူကြီးထွားလို။ လူအုပ်စုမှထွက်ခွာလိုသူများကိုရှာဖွေသည်။ မနက်ဖြန်ဖက်၊ အမြင်အာရုံ၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်သူတို့၏စိတ်ကိုဆန့်ထုတ်ပြီးသူတို့ရနိုင်သမျှသောအရာထက်ဝေးကွာသောလူများရှိသည်။
1cm အထူ XPE ကစားဖျာသည် PE အိတ်များကိုထုပ်ပိုးနိုင်သည်
၁.၅ စင်တီမီတာအထူ XPE ကစားဖျာသည် PE အိတ်များကိုထုပ်ပိုးနိုင်သည်
ရှေ့သို့ XPE ကစား Mat
Epe ရေမြှုပ်ပစ္စည်း Mat ကစား
Epe ရေမြှုပ် Mat ကစား